May 2020 - PARIJATMEDIA
तत्काल लकडाउन खोल्न सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले तत्काल लकडाउन खोल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा लगाइएको कर र गाडी आयात सम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन नाडाले माग गरेको छ। नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जारी लकडाउन खोल्नुपर्ने माग गरेको छ । जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि जारी गरेका सुरक्षाका मापदण्डको कडाइका साथ पालन गर्दे अब व्यवसायिक कारोबारलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने नाडाको भनाई छ। सबै सर्वसाधारण निर्धक्क सडकमा हिंडिरहेको भन्दै व्यवसायलाई बन्द गरेर मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्ने नाडाको ठहर छ। सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ। नाडाले जेठ १५ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमाथि लगाइएको थप कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । बजेटबारे
वि.सं.२०७७ जेठ -१९,सोमवार, ई.सं.२०२० जून -१, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० तछलाथ्व,प्रमादी,उत्तरायण-ग्रीष्म,ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि-दशमी , १२:२४ बजे उप्रान्त एकादशी,नक्षत्र-हस्त , २३:१३ बजे उप्रान्त चित्रा,योग-सिद्धि , ११:४४ बजे उप्रान्त व्यतीपात,करण-गर १२:२४ बजेदेखि वणिज , २३:१० बजे उप्रान्त वालव,चन्द्रराशि-कन्या,आनन्दादि योग-वज्र,सूर्योदय-०५:१०, सूर्यास्त-१८:५४,दिनमान-३४ घडी १९ पला । व्रत/पर्व-गंगा दशहरा , रामेश्वर गंगापूजा,वज्रगुरु पद्मसम्भव जयन्ती, गोसाइँकुण्ड स्नान समाप्ति,हत्यामोचन तीर्थस्नान। रिडी, रुरुक्षेत्रमा हृषीकेशोत्सव, बाजुरास्थित बेहडाबाबामा जलार्पण। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) – पढाई लेखाईमा चासो बढ्नेछ भने प्राबिधिक शिक्षामा सफलता हात लाग्नेछ । समाजमा सानो काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । स्वास्थ्य सबल रहने हुनाले राम्रा तथा
जुवा’मा हा’रेपछि श्रीमतीलाई खेतमा लगेर बुझाए – बाजीमा जित्नेले जबर्ज’स्ती घि’सारेर क’र’णी गरे
उडिसा । भारतको उडिसा राज्यमा एक व्यक्तिले श्रीमतीलाई जु’वामा हा’रेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उडिसाको बालेश्वर जिल्लाको मलाङबालीकुटी गाउँका एक व्यक्तिले जु’वामा हा’रेपछि पत्नीलाई जित्ने मान्छेको जिम्मा लगाएका हुन् । पी’डित महिला’ले बालेश्वर जिल्लाको एक प्रहरी कार्यालयमा यसै साता उ”जुरी गरेपछि घ’ट’ना सार्वजनिक भएको हो । पी’डित महिलाका श्रीमान् र जुवा जित्ने व्यक्ति फ’रार छन् । जु’वामा जित्ने व्यक्ति सोही गाउँका अबिराम दलाई भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले बा’जीमा जितेकी महिलालाई सोही दिन ब’ला’त्का’र गरेको पी’डितले बताएकी छिन् । २७ मेमा स्थानीय प्रहरी चौकीमा उ’जु’री गर्न खोज्दा प्रहरीले मेलमिलाप गर्न सु’झाब दिएका थिए । तर, प्रहरी उपरीक्षकलाई नै भेट गरेर पी’डितका तर्फबाट निवेदन दिइएको थियो । पी’डित महिलालाई जाँचका लागि बालेश्वर पठाएको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपी’वि’रु’द्ध ब’लात्का’रलगायत
बाजुरा, १८ जेठ । बाजुरा जिल्ला अस्पतालकाे आइसोलेसनमा ज्या’न गुमाएकी बालिकाकाे को’रोना सं’क्रमणबाटै मृ’त्यु भएको बताइएकाे छ ।बुढिगंगा- १ घर भएकी २ वर्षीय बालिकाको आईतबार बिहान २ बजेतिर मृ’त्यु भएको थियो । उनको स्वाब धनग’ढीस्थित सेती प्रादे’शिक प्र’योगशालमा पठाएको थियो । आईतबार दिउँसो आएको रि’पोर्टमा ती बालिकामा को’रोना सं’क्रमण देखिएकाे सुदुरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशानलयले जनाएको छ । मृतक बालिकाकी २३ वर्षीय आमालाई पनि को’रोना संक्र’मण पुष्टि भएको छ । संक्र’मित आमालाइ पनि सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । तर मृ’तक बालिकाका बुवाको रिपोर्ट भने ने’गेटिभ आएको छ । मृ’तक वालिका, आमा र बुवालाई जेठ १५ गते आइसोलेसनमा राखिएको थियो । तीनै जनाको साेही दिन स्वाब ध’नगढी पठाइएको थियो । बुढिगंगा नगरपालिका १ धुरालसैनमा माविको आइ’सोलेसनमा अवस्था जटिल भएपछि उनीहरूलाइ सदरम
काठमाडौं / मुलुकका निजी विद्यालयहरुले आगामी बुधबारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै कोरोना १९ संक्रमण रोक्न आवश्यक सावधानी अपनाउदै विद्यालयको पठनपाठन क्रमशः शुरु गर्दै जाने उल्लेख गरे अनुसार निजी विद्यालयहरुले भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न लागेका हुन् । देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएको हुनाले सामुदायिक विद्यालय भने कहिले खुल्छन भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । तर उता विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले विगत दुई महिना अघिदेखि लगाएको लकडाउनको प्रभाव पाठ्यपुस्तक छपाईमा पनि परेको छ । जसको कारण विद्यालयहरुले कक्षा सञ्चालन गर्ने मिती घोषणा गरिसक्दा समेत पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अझै सकिएको छैन् । त्यसो त अघिल्लो वर्षको बिक्रिदर अनुसार छपाईको काम
१२ कक्षामा पढ्ने युवतीको गोप्य भिडियो भाइरल..हेर्नुहोस VIDEO
काठमाडौं । बेला–बेला गो’प्य कार्य लिक हुँदा धेरैले दुख पाएका छन् । केहीले आ त्माह त्या समेत गरेका छन् । यसैले आफ्नो गो प्य कुरामा दर्बिलो गो’प्यताका सुरक्षा अपनाउँनुहोला । कहिलै हेलचेक्र्याई नगर्नु होला । अहिले कक्षा १२ मा अध्यानरत एक युवतीको गो प्य भिडियोले यस्तै हैरानी बनाएको छ ।ती युवतीले आफ्नो प्रेमीसँगको गो प्य भिडियो लिक भएपछि उनी हैरानीमा छिन् । उक्त भिडियोमा महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौ न आसन जस्तो देखिन्छ उनीहरुले गो प्य कोठा भित्र एक अर्कालाई अगालो हालेका छन् । घरमा कोही नभएको मौका पारी आपसी समझदारीमा बनाइएको से क्स क्लिप लिक भएको देखिन्छ ।एक अर्कासंग नजिकिदै र से ‘क्स सम्बन्धी कुरा गर्दै गरेको देखिन्छ । युवती युवकको माथि यौ न आसनमा बसे जस्तो देखिने यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पनि भा इरल भएको छ । उनीहरुको आपसी समझदारीमा खिचिएको यो भिडियो कसले भाइरल गर्यो भन्ने थाहा भएको छैन् ।श्
जेठ २० गतेबाट अझै १ महिना लकडाउन लम्बिदै, हेर्नुहोस कति गते सम्म थपिदै छ
भिडियो अन्तिम मा छ नछुटाई हेर्नुहोला! जेठ २१ गतेबाट विद्यालयहरु खोल्न र भर्ना सुरु गर्न आग्रह ! पुरा पढ्नुहोस्… काठमाडौं निजी क्षेत्रमा क्रियाशील शैक्षिक संघ-संस्थाहरुले कोरोना महामारीको बीचमा पठनपाठनलाई सहज बनाई शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सरकारसमक्ष सहयोगको आह्वान गरेका छन् । सो क्षेत्रमा काम गर्ने प्याब्सन, एनप्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ नेपाल, अभिाभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले १० बुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गर्दैै सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरेका हुन् । ती संघ संगठनले पछिल्लो जटिल परिस्थितिमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने लगायत १० बुँदे धारणा सार्वजजिक गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संगठनले जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । बर्दियाको मधुवन नगरपालिकासँग जोडिएका सम्पूर्ण खुला सीमा बन्द हुने भएको छ । नगरपालिकाको आज बसेको सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय बैठकले भारतसँग जोडिएका सबै सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि भारतबाट लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको नगर प्रमुख गणेशबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरभित्र कोही कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका अवस्थामा बर्दियामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा बनाइएको आइसोलेशनमा राखेर उपचार गरिने छ । शय्या सङ्ख्या अपुग भएमा कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि मधुवनमै आइसोलेशन वार्ड निर्माण गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
मृतक नवराज विक र सुस्मा मल्लको कल रेकर्ड भनेर सामाजिक संजालमा फेक अडियो सार्बजनिक गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नु पर्छ (भिडियो)
काठमाडौ, १८ जेठ । यतिबेला नवराज विक प्रकरणले देशभर बहस सिर्जना गरेको छ । अहिलेसम्म यस प्रकरणमा ६ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक, पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवत्तीलाई दुलही बनाउँन गएका थिए । तर नवराजसँगै गएका ६ जनाको लाश मात्रै फर्केर आयो । यस घटनाका सम्बन्धमा केही नयाँ कुरा खुल्दै आएको छ । तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीकहाँ पुगे । नवराज र उनका १९ जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन् । तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बिग्रियो । कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्थे । तर, नवराज
काठमाडौँ । धावनमार्ग निर्माणका काम सम्पन्न भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी तिव्र पारिएको छ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द रहेको अवस्थामा धावनमार्ग निर्माणको काम सकिएको हो ।लामो समयदेखि विभिन्न कारणले धावनमार्ग निर्माणको काम सुचारु हुन नसकेपनि उडानहरु प्रतिबन्ध भएपछि कामले तिव्रता पाएको हो विमानस्थलको दक्षिणतर्फ ३ सय मिटरको धावनमार्ग निर्माण गरिएको छ । धावनमार्ग विस्तारपछि सञ्चालनको तयारी तिव्र पारिएको छ । कोरोना महामारीले विश्व प्रभावित भइरहेको बेला सामाजिक दुरी कायम गर्दै विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले बताए ।विभिन्न देशमा अलपत्र नागरिकहरुलाई स्वदेश ल्याउन तयारी भइरहेको उनले बताए । सरकारले सञ्चालनको सूचना जारी नगर्दासम्म सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गरेर सञ्